E-Library | Tamang Feed
Tamang E-library भनेको के हो?
२ TamangElibrary किन नि ?
३ TamangElibrary कसरी स्थापना हुन्छ?
४ तामाङइलाइब्रेरीमा के कस्ता सामग्री राखिनेछन्?
५ के कति सामग्री राखिनेछन्?
६ यो पुस्तकालय कहिलेदेखि सुरु हुन्छ?
७ के मैले सामग्री पढ्न शुल्क तिर्नु पर्छ?
८ म लेखक हुँ र म पनि आफ्नो पुस्तक राख्न चाहन्छु। त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्ला?
तपाई आफ्नो पुस्तक राख्नु सक्नु हुन्छ। यो तपाईहरुकै सेवाको नागि हो। स्रष्टाको परिचय गराउँनु हाम्रो उद्दश्य पनि हो। तर तपाईको पुस्तक यस पुस्तकानयले तय गरेको तामाङ पुस्तकको परिभाषा र मापदण्ड भित्र पर्नुपर्दछ। दोस्रो पुस्तकालयमा राख्नका लागि हस्ताक्षरसहित अनुरोधपत्रमा पठाउनु पर्दछ। (‘सामग्रीको मापदण्ड’ र ‘अनुरोधपत्र’ उपलब्ध गराइनेछ)
९ म पनि तामाङइलाइब्रेरी सहयोग गर्न चाहन्छु। के गर्नु पर्ला ?
१० यो इलाइब्रेरी सञ्चालनमा को को छन्?
Source: Tamang E-library
Tamang Feed: E-Library